Dayactir saacadda Apple ee ku dhegta tufaaxa | Wararka IPhone
Waa markii iigu horreysay ee aniga igu dhacdo, laakiin waxaan horey u aragnay kiisas badan oo Apple Watch ah oo xayiran muujinta tufaaxa si aan xad lahayn.
Siday aniga igu dhacday oo aan xalliyey anigoon u jeedsan xalka Apple - u qaadista adeeg taageero farsamo-, Waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago xalka.
1 Waxa ugu horeeya waa samir
2 Waxa labaad waa in xoog lagu bilaabo
3 Waxa saddexaad waa in la banneeyo baytariga
4 Waxa afaraad waa inaad hesho Apple Watch-kaaga
5 Waxa ugu dambeeya waa in la aado taageerada farsamada Apple
Waxa ugu horeeya waa samir
Marar badan ayay u badan tahay aragtideena gaarka ah ee waqtiga in dhibaatadu tahay. Apple Watch, gaar ahaan jiilkii ugu horreeyay, waxay qaadan kartaa waqti dheer in la cusbooneysiiyo oo ay umuuqato inay ku dhagan tahay.
Xaaladdayda, tufaaxa ayaa soo muuqday markii la rakibey cusbooneysiintii ugu dambeysay. Waxaan uga tagay iyada oo ku xidhan habeenimadii salka si aan u arko inay waqti uun tahay iyo in kale. Laakiin way waagu baryay oo wali sidii bay ahayd, markaa waxaan u qaatay inaanay ahayn dulqaadkayga oo yaraaday.
Waxa labaad waa in xoog lagu bilaabo
Ma isku dayi lahaa daaweyntan aniga oo aan hubin qodobka koowaad, maxaa yeelay dib-u-soo-celin xoog leh inta cusbooneysiinta ay wax uga sii dari karto.
Si loo sameeyo dib u bilaabid qasab ah waa inaan riixnaa oo qabannaa labada badhan ee Apple Watch (taajka iyo badhanka) ugu yaraan 10 ilbidhiqsi. Laakiin, run ahaantii, waa inaan sugnaa illaa shaashadda ay madoobaato (tufaaxku wuu baaba'aa) oo dib ayuu u soo muuqanayaa. Kadibna waxaan sii deynaa badhamada.
Waxa saddexaad waa in la banneeyo baytariga
Haddana, samir. Haddii ka dib markaad ku qasabto dib-u-bilaabista (waad isku dayi kartaa dhowr jeer haddii aad rabto), waxna ma tusayo mooyee tufaaxa, Waa inaan ku dhaafno miiska oo aan soo dejino.
Ogeysiis: Meeshaan kuma arkin, laakiin sidaas ayey iila shaqeysay aniga, waana sida aan kuu sheego. Dadku aad ayey ugu nugul yihiin daryeelka batteriga beryahan dambe in kasta oo ay caadi tahay in mar la sameeyo, haddana si buuxda u bixinta batteriga lithium laguma talinayo. Uguyaraan taasi waa waxa ay dhahaan.
Waxaa iman doona waqti aan ku qasbaya dib u bilaabista inaysan dib u bilaabin (wax la yaab leh, maxaa yeelay, sida magaca ka muuqata, waa la qasbay). Halkii, wuxuu tusi doonaa abeesada tilmaamaysa inaad ku rido Apple Watch lacag. U fiirso isaga, saar si aad u rarto oo aad tallaabada afaraad.
Waxa afaraad waa inaad hesho Apple Watch-kaaga
Tag barnaamijka "Find My iPhone" (hadda waxaa loo yaqaan "Raadi") oo ka socda iPhone-kaaga oo ka xulo Apple Watch. Dabcan, waxay kuu sheegi doontaa inay maqan tahay. Taabo "Ogeysiis markii la helay" iyo "Dhawaaq codka".
Haddana markale, dulqaad. Markuu Apple Watch shidan yahay (waxaad arki doontaa sida markan haddii uu si fiican u shito), wuxuu ciyaari doonaa dhawaaqa, marka lagu daro, wuxuu ogeysiin doonaa iPhone-ka in la helay.
Hubso in iPhone ku dhow yahay Apple Watch si ay Apple Watch u leedahay qadka internetka.
Waxa ugu dambeeya waa in la aado taageerada farsamada Apple
Haddii wax kasta oo kale ay dhacaan, tallaabada shanaad waa inaad u tagtaa taageerada farsamada Apple. My Apple Watch waa in ka badan laba sano jir (oo waxaan lumiyay tigidhka), sidaa darteed sinnaba kiisabku ma dabooli doono. Dabcan, haddii aad ku leedahay dammaanad, tallaabada shanaad waxay noqon doontaa waxa ugu horreeya ee la sameeyo. Adigana ma lagu xaliyay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Sida loo hagaajiyo saacadda Apple Watch oo barafoobaysa muujinta tufaaxa tufaaxa
Dhowr maalmood ka hor ayaan qasbay inaan dib u bilaabo taasna waxay ahayd meeshii tufaaxa lagu hagaajiyay, waxay ahayd markii iigu horreysay ee aniga igu dhacdo waxaanan  daawanayaa laga bilaabo maalintii ugu horreysay ee ay iibiso Spain, si kastaba ha noqotee, ku qasbidda dib u bilaabashada mar kale waxay ahayd la xalliyey, waa inay ahaataa qaar ka mid ah cayayaanka nooca ugu dambeeya
Nabade Ricky! Tan iyo markii aan daabacay, qaar badan ayaa ila soo xiriiray iyaga oo sheegaya in iyaguna iyaguna. Haa haa, waxay umuuqataa inay hubaal tahay inay lasocoto nooca ugu dambeeya ee watchOS. Waxaan rajeynayaa in kuwa dhaca ay taasi caawinayso iyaga.
Sidoo kale ku qasbaya dib-u-bilaabista mar labaad ayaa la xaliyay, waa inay noqotaa xoogaa fashil ah qaabkii ugu dambeeyay
Ku jawaab alexriv
Alex Zeuss dijo
Waxaan ku biirayaa liiska kuwa shilku saameeyay ka dib markaan cusbooneysiiyay nooca software-ka ee ugu dambeeyay ... si kastaba ha noqotee, ka fog in la xalliyo, kiiskeyga wali way dhacdaa mar kasta oo aan saacadda furo. Waxaan rajeynayaa in Apple ay dhibaatadan si dhakhso leh ugu hagaajin doonto balastar.
Jawaab Alex Zeuss
Isla sidaas ayaa igu dhacda. Waxaan doortay inaanan u oggolaan inay damiso, markii iigu dambaysay wax badan ayay igu qaadatay inaan bilaabo. Waxaan rajeyneynaa dhawaan inay xaliyaan.
Waxa kale oo aad ka furi kartaa iPhone-ka sidii miciinka ugu dambeeya, way shaqaysaa, dhibaatadu waxay tahay inuu gaabis yahay oo ay tahay waqtigii mar labaad la is waafajin lahaa.
Jawaab Juan Gomez
Miyey ku dhacaysaa dhammaan moodooyinka? Waxay igu dhacaysaa aniga laba taxane Apple Watch ah 0 iyo taxane 1 oo qaraabo ah. Taxanaha 3 miyey dhacaysaa?
Guriga waxaan ku leenahay taxanaha 1 iyo silsiladda 3, sidoo kale annagana way nagu dhacdaa. Waxaan u maleynayaa inay tahay oo kaliya markaan u dhigno lacag bixinta halkaasna waligeed kama baxo xayndaabka.
Ku soo jawaab Richy
isla waxbaa igu dhaca aniga sidoo kale. Had iyo jeer waan damiyaa mar walbana oo aan shido way sudhan tahay waana inaan dib u bilaabaa. Tani way igu dhacday aniga tan iyo markii aan u cusbooneysiiyay noocii ugu dambeeyay.
Ma ogtahay goorta cusbooneysiinta soo socota ay soo baxdo? Waxaan hayaa taxanaha 3 tanina waxay igu dhacdaa aniga kadib casriyeyntii ugu dambeysay ..
Isla waxbaa igu dhacaya aniga ... Markii la soo dejisto waxaan had iyo jeer u dhigaa inaan ku dhajiyo istaagga Belkin laakiin nooca ugu dambeeya ee software-ka ayay ku haysaa tufaaxa. Haddii aan u dhigo inaan ku soo dallaco xeedho iPad-ka si otomaatig ah ayuu u daarmaa oo tufaaxdii ayaa baaba'do
Ku jawaab Cade
Wax la mid ah ayaa aniga iyo wiilkayga ku dhacay, oo leh laba 2mm Watch taxanaha 42s. Waxaan la xiriiray Apple Care (wali waxay kujiraan damaanad) waxayna igu balamiyeen balan at Apple Store. Markii aan qaatay iyaga ayaa qaladka sameynayay, haddiiba ay dhacdo, waxaan cajalad ku duubay saacad si aad u aragto waxa dhibaatadu ahayd. Dhowr maalmood ka dib waxay igu yiraahdeen soo qaado. Way igu wareejiyeen iyaga oo sheegaya in ay dib u aasaaseen nidaamka si ka qoto dheer intii aan awoodi karayey. Isla galabtaas dhibaatadii ayaa soo noqotay. Waan soo celiyey iyaga oo dhawr maalmood kadib igu yidhi markale soo qaado. Waxay dib u yagleeleen wiilkaygii oo kuwaygii ku badaleen mid cusub halkaana waanu joognaa. Mine wuxuu leeyahay noocii hore, 4.2.3 (mana qorsheynayo inaan cusbooneysiiyo, dabcan). Waxaan sidoo kale u maleynayaa inay tahay dhibaato software waxaanan u maleynayaa in hadda, Apple ay tahay inay mar hore ogaato waxa dhacaya oo ay ku wargeliso isticmaaleyaasha inay na qanciyaan ama ay ku dhawaaqaan barnaamij sida loogu sameeyay qalab kale munaasabadaha kale. Salaan iyo dulqaad (maxaa daawo ah)
Waxay sidoo kale igu dhacday aniga oo sameynta dib u dejinta waxaan ku soo noqday isla meeshii. Wuxuu horey u sameeyay dhowr tijaabo oo waxba. Waxaan u maleynayaa in talaabada go'aan qaadashadu ay noqotay lambar 4, markii aan ka shaqeynayay "Search for apple watch" taleefanka iphone, isla markaana ii sheegayo goorta la helo. Qiyaastii 3 daqiiqo ka dib waxaan maqlay dhawaqa, waxaan riixay badhanka aqbalaada ka dibna mar labaad ayuu u shaqeeyay sidii hore.
Wow, waa maxay nasteexo. MAHADSANID.
Carlos Salas - Cordoba - Argentina dijo
Ikhtiyaar aad u fiican oo ah "helitaanka IPHONE" si aan jiilkeyga ugu horreeya Apple uga ilaaliyo habka tufaaxa laba maalmood. Aad baad ugu mahadsantahay ka qayb qaadashada wanaagsan.
Jawaab Carlos Salas - Cordoba- Argentina
Aad baad ugu mahadsantahay taageeradaada, waxtar ayey ii laheyd aniga, waxaan ku isticmaali jiray saacadeyda tufaaxa habka tufaaxa 3 maalmood ... waxaan moodayay inaan lumiyay. Dhowr jeer ayaan dib ubilaabay wixii ugu dambeeyayna waxay ahayd inaan raadsado tufaax saacado kadib daqiiqado kadib dib ayeey dib u bilaabatay. Runtii aad baad u mahadsan tahay.
Aad baad u mahadsantahay, ikhtiyaarka "Raadin" waxaa lagu xaliyay dhowr ilbiriqsiyo gudahood.
Ku jawaab Elia
Waxay ahayd wax fiican! Waxaan raacay talaabooyinkaaga ku dhowaad dulqaad la'aanna waan guuleystay!
Ku jawaab Luiso
Waxaan isku dayay khiyaanooyinka oo dhan, laakiin cidina iima shaqeyn.
Mar dambe ma haysto Apple Watch - Taxanaha 1 - oo ku xiran iPhone-ka sidaa darteed ma sameyn karo tallaabada 4, qofna ma garanayaa waddo kale, isagoo iska ilaalinaya u qaadashada adeegga farsamada haddii ay macquul tahay? (Qiimaha waa around 220)
Jawaab Jose San Martín
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga, mar dambe ma la xiriirin mana jirto wado lagu daarto, tufaaxa ayaa sii jira remains Ma jiraa qof garanaya sida loo soo celiyo xiriirinta iphone si uu u sameeyo tallaabada afaraad?
Waad salaaman tahay! Waxaan hayaa saacad tufaax ah jiilkii labaad, wuxuu ahaa mid qabow markaan jimicsi sameeyo, ciladaha dhanka Bluetooth-ga ah iyo markii aan daminayo wuxuu ku xayiran yahay tufaaxa, waa inaan kala jabiyo oo aan ku laabo taleefankayga. Tan waa la xaliyay hadda.
wanaagsan, taxanaheyga 1, markii aan u dhigay lacag, tufaaxa ayaa soo muuqda oo si isdaba joog ah u baaba'aya laakiin ma dallaco mana shido, caawimaad yar fadlan, mahadsanid.
Jawaab NADIR KACI
Apple waxay joojineysaa saxiixa macruufka 11.2.6, mar dambe hoos uma dhigi karno iOS 11.3